Blog – Trano 3D
Za ihany dia efa mahavita ny tranoko
septembre 15, 2019 novembre 26, 2019 trano.admin
Za ihany no manao ny tranoko Fananganana trano : ny tokony ataoko mialoha Manana tany efa vonona hananganana trano ianao ? Nefa tsy hainao hoe inona no tokony atao voalohany ? Marina fa mila manao "permis de construire" fa mialohan'izay ny tokony atao voalohany dia ny mampanao études : plans d'architecture, 3D extérieurs sy devis… Lire la suite Za ihany dia efa mahavita ny tranoko
La Vérité sur la construction de maison à Madagascar
janvier 16, 2019 trano.admin
Pour construire la maison de vos rêves à Madagascar, il faut commencer par ...
Maison 3D à Madagascar
octobre 25, 2018 octobre 25, 2018 trano.admin
Ny trano atao 3D
juillet 8, 2018 juin 11, 2019 trano.admin
Ny 3D amin’ny architecture Rehefa manao trano isika dia mety tsy mahazatra antsika ny mampanao trano 3D kanefa rehefa ho fantatrao ny tena ilana azy dia tena ho liana tokoa ianao. Zava-dehibe tokoa ny mampanao azy satria io no ahitana mazava tsara ny endrika ivelan’ny trano rehetra : loko, haingo, … Ny 3D dia sary… Lire la suite Ny trano atao 3D
Trano hipetrahana : ny tokony atao raha vao hanorina
mai 17, 2018 juin 11, 2019 trano.admin
Ankoatran’ny vola hanaovana azy dia misy lalàna tsy maintsy arahana ny fanamboarana trano eto Madagasikara. Tsy zavatra kelikely izany ary misy fepetra mila arahana raha te hanana trano tsara endrika sy mateza ary manara-dalàna. Ahoana hisafidianana ny tany ? Mazàna moa isika rehefa manapa-kevitra ny hanao fanorenana vaovao dia mijery tany somary misitaka ny renivohitra.… Lire la suite Trano hipetrahana : ny tokony atao raha vao hanorina
Ny plans d’architecture
mai 9, 2018 mai 9, 2021 trano.admin
Rehefa mahare isika hoe « plan » dia ny plans de niveaux no ao an-tsaintsika : plans izay tahaka ny trano hita avy eny ambony, tapaka mitsivalana, ka ahitana ny rindrina sy ny efitra ao anatiny. Inona ny plans d'architecture ? Ny plans d’architecture nefa dia fikambanana plans maromaro ; fanehoana an-tsary ny trano iray… Lire la suite Ny plans d’architecture